Site na: KongoLisolona: Septemba 26, 2020 00: 45 Enweghị asịsa
Ala na agwaetiti ndị a nwere ụdị ịdị mkpa nke iji ebe osikapa na ndị ohu na-ebubata ịrụ ọrụ ebe ahụ.
Ndị ohu a tumadi họọrọ ndị bi na nke African n'ụsọ oké osimiri ebe a na-akọ osikapa na onye guzobere site 1787 naugbu a Sierra Leone.
Les Guluu bụ ọrịa ịba na-acha odo odo na-enweghị ike ịbịanye aka, nke ịzụ ahịa na-ebubata ma bụrụ nke jupụtara na mpaghara ahụ. N'adịghị ka ndị Europe hapụrụ ebe ahụ n'oge opupu ihe ubi na ọkọchị.
Les Guluu, ji nke nta nke nta ghọọ ihe ka n'ọnụ ọgụgụ, enwechaghị ihe jikọrọ ndị obodo ahụ, nke na-akọwa ichebe ọdịbendị ha.
Ọtụtụ Guluu gbabara n'ubi ahụ na, ndị gbara ọsọ ndụ na Florida, guzobere, na-agwakọta ndị India. Creeks nwekwara gbara ọsọ ndụ, otu nke Seminoles Nwa. "The Guluu lụọ ọgụ ka e wee mara ma chebe ọdịnala ha! »
Ọkt31 02: 37